banner Archives - SindhuKhabar
जुगलको अखिल क्रान्तिकारीमा अच्युत
बराम्ची । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्टिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) जुगल गाउँपालिका कमिटिमा अच्युत अधिकारी अध्यक्षमा चयन भएका छन् । आज भएको सम्मेलनले उनको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरिएको हो । कमिटीको उपाध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ, अर्का उपाध्यक्ष इश्वर गुभाजु(सानु), सचिवमा उमेश लामिछाने रहेका छन् । त्यस्तै सहसचिवमा अस्मिता श्रेष्ठ […]
विभिन्न ६ बुँदामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण
चौतारा । मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, सिन्धुपाल्चोकले प्रधानमन्त्रीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तरको महिना दिन बित्नै लाग्दा सरकारबाट भएका केही निर्णयहरुले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्थामा गम्भिर प्रभाव पार्ने देखिएको हुँदा ध्यानाकर्षण गराएको हो । आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीसामू ध्यानाकर्षण गरिएको मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, सिन्धुपाल्चोकले जनाएको […]
करणी गर्ने कारागार चलान
चाैतारा । जवर्जस्ती करणी मुद्दामा १० बर्ष कैल सजाय पाएका एक युवा पक्राउ परेका छन् । सर्बोच्च अदालतले २०७२।०८।०६ गते गरेकाे फैसलाले जबरजस्ती करणि मुद्दामा १० बर्ष कैद सजाय भई फरार रहेका जिल्ला सिन्धुपाल्चोक लिसङ्खुपाखर गा.पा. वडा नं. १ का ३५ बर्षिय रवि वि.क. पक्राउ गरेकाे हाे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार विकलाई बुधबार […]
हेलम्बुबाट काठमाण्डौ जोड्ने वैकल्पिक सडक सूचारु
हेलम्बु । बाढी र पहिरोले अबरुद्ध भएको हेलम्बु–काठमाडौ सडक सूचारु गर्न समस्या भएपछि अर्काे वैकल्पिक मार्गबाट सवारी आवागमन गरिएको छ । (आज) मंगलबारबाट काठमाडौं जोरपाटीबाट बैकल्पिक बाटो भोटेचौर, काउले, धुसेनी हुदै मानेभञ्ज्याङ, तालामाराङ, ग्याल्थुम ,ढुंग्रेबजार सम्म संचालन भएको हो । साउन १७ गते आएको बाढिले काठमाडौ मेलम्ची हेलम्बु यातायातको सडक बाटो ढाडखोला स्थीत पुर्ण रुपमा […]
प्रमोद गिरी दुई वर्षअघि विश्वव्यापी एकसाथ फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)ले नेपालमा समेत आक्रान्त पार्यो । धेरै संक्रमित भए । धेरैले ज्यान गुमाए । केही समय पछि फेरि नयाँ भेरियण्टसहितको नयाँ संक्रमण फेरि फेला पर्यो । अघिल्लोजस्तै यो भेरियण्टले पनि धेरैको ज्यान लियो । स्थिति भयावह बनायो । कोरोना नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयासहरु भए । […]
घरवारविहीन १५ परिवारलाई जस्तापाता
हेलम्बु । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका ३ स्थित बाढीका कारण घरवारविहीन भएका १५ परिवारलाई जस्तापाता वितरण गरिएको छ । नेपाल ह्योल्मो समाजसेवा संघका अध्यक्ष पेमा ह्योल्मोको नेतृत्वमा ह्योल्मो समाजसेवा संघ र कफि ब्रीउ स्टेसन जावलाखेलका संचालक बालक मगरको तर्फबाट जस्तापाता वितरण गरिएको हो । माओवादी केन्द्रका नेता समीर गिरिको अगुवाइमा प्राप्त जस्तापाता बाढिले घर बगाएका हेलम्बु […]
बाढी–पहिरोको क्षतिबारे सर्वपक्षीय टोलीद्वारा प्रचण्डलाई जानकारी
काठमाण्डौं । हेलम्बु–मेलम्ची बाढीको क्षति जानकारी गराउन सर्वपक्षीय टोली नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामू ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको बारेमा सबै दल सम्मिलित एक प्रतिनिधि मण्डलले प्रचण्डलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सो टोलीले बाढीपहिरोमा भएको क्षति र तत्कालका लागि आवश्यक पूर्वाधारका बारेमा अध्यक्ष […]
काँग्रेसकाे बागमती प्रदेशकाे शुभेच्छुक संस्थाकाे सदस्यमा ज्ञानेन्द्र थापा मनाेनित
काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसकाे बागमती प्रदेशकाे शुभेच्छुक संस्थाकाे सदस्यमा ज्ञानेन्द्र थापालाई मनाेनित गरेको छ । काठमाडौंमा आज खेलकुद विभाग संयाेजक माेहन बहादुर बस्नेतले थापालाई मनाेनित गरेका हुन् । थापा काँग्रेसमा क्रियाशील स्थानीय नेता हुन्।